६. आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस् र सधै त्यसमा कठिबद्द भएर लाग्नुहोस् ।७. डरलाई सधैभरि जित्नुहोस । म सफल बन्दिन, यो काम गर्न सक्दिन, ममा खुबि र दक्षता नै छैन, म अरुजस्तो छैन भन्ने भावनालाई आजैदेखी टाढा राख्नुहोस् ।८. धैर्यशिल रहनुहोस् । एक रात मै सफल हुन सकिदैन भन्ने तथ्य बुझ्नुहोस् र लगातारको मेहनतले नै सफलता देखाउने हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् ।
९. धेरै सोचेर र प्लान गरेर नबस्नुहोस् । कुनै काम गर्नु छ भने त्यसलाई तरुन्तै सम्पन्न गर्नुहोस् ।१०. सधै खुल्ला सोच राख्नुहोस् । जीवनमा सफलता पाउन धरै बाटाहरु रहेको तथ्य नभुल्नहोस् । एउटा बाटोबाट फेल भए अर्को बाटो पहिल्याउनुहोस् ।
अरुको असफलताबाट सिक्नुहोस : तपाईं सफल हुन चाहनुहुन्छ भने अरुले प्रयोग गरेको बाटो हेर्नुहोस् । उनिहरु किन असफल भए ? यस बारेमा खोजबिन गर्नुहोस् र त्यही काम फरक तरिका बाट गर्नुहोस जसले तपाईंलाई सफल बनाउनेछ ।तुलना गर्नुहोस : सबै चिज सबै ठाउमा फिट हुँदैन । त्यसैले तपाईंले आफुले ल्याउन चाहेको प्रोडक्ट तपाईंले छानेको ठाउमा फिट हुन्छ कि हुँदैन तुलना गर्नुहोस ।सबैको जानकारीको शेयर गर्नुहोस !!
प्रधानमन्त्री ओलीको ठोकुवा: रामको जन्मभूमि माडी नै, भब्य मन्दिर बनाउन निर्देशन